तिनीहरूलाई बारेमा रूस बनेको analogues र समीक्षा: मोमबत्ती "Gynoflor ई"
किनभने आफ्नो शरीर संरचना को महिला, एक योनी suppository प्रयोग गर्न आवश्यक अक्सर छ। को तयारी को प्रयोग अलग अलग हुन सक्छन्: विरोधी-जीवाणु वा antiviral प्रभाव, फंगल घाउ को उपचार, को microflora को बहाली, हर्मोन प्रभाव, र यसको अगाडी। आजको लेखमा हालतमा "Gynoflor ई" कसरी लागू गर्न भन्नेछु। मूल्य, समीक्षा, analogues तपाईंको ध्यान प्रस्तुत गरिनेछ। यो जानकारी भए तापनि यसलाई आत्म अक्सर जटिलताहरू निम्त्याउँछ कि सम्झना गर्न आवश्यक छ। लक्षण परेशान राम्रो छ भने डाक्टर बारी गर्न। सबै पछि, तपाईं मजबूती आफ्नो रोगको कारण निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, तर केवल यो सुझाव।
औषधि "Gynoflor ई"
यस दबाइ को प्रयोगमा Analogs र निर्देशन मा तपाईंको प्रस्तुत गरिनेछ। घटक प्रि-लायक पढेर र दबाइ लागू गरिन्छ जो अवस्थामा थाहा छ। तयारीको "Gynoflor ई" सामान्यतया महिलाहरु को योनी बसाबास गर्नु भनेर लाभदायक जीवाणुहरु को एक जटिल छ। त्यसपछि त्यहाँ Lactobacillus Acidophilus र estriol छन्। उत्तरार्द्ध एक महिला हर्मोन ऊतक लोच लागि जिम्मेवार छ।
को उपचार को लागि चिकित्सा लागू योनी dysbiosis, एन्टिबायोटिक, संक्रमण, गरिब स्वच्छता र अन्य कारण लिएर कारण। endometriosis र एस्ट्रोजन निर्भर ट्यूमर, अतिसंवेदनशीलता लागि दबाइ "Gynoflor ई" को प्रयोगको लागि Contraindicated, र पहिलो महिनावारी अघि। गर्भावस्था को समयमा दबाइ को प्रयोगमा कुनै औपचारिक नैदानिक डेटा। त्यसैले, यस्तो उपचार को संभावना को प्रश्न डाक्टर solves। को चिकित्सा 6-12 दिनको लागि सीधा योनी 1-2 ट्याब्लेटको मा एक दिन इंजेक्शन छ। दबाइ हरेक फार्मेसी मा एक निर्धारण बिना खरिद गर्न सकिन्छ। सानो प्याकेजिङ्ग (6 suppositories) 1,100 rubles भन्दा कुनै लायक। 12 भन्दा बढी टुक्रा बारेमा 1,600 rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, अधिक लाभदायक ठूलो प्याकेज किन्न योनी ट्याब्लेटको को।
संरचना र नातेदार: औषधि "Gynoflor ई" विभिन्न analogues छ। पहिलो मामला मा हामी संरचना मा समान छन् भन्ने निरपेक्ष विकल्प बारे कुरा गर्दै छन्। यी "Atsipol", "Bifidumbacterin", "Laktonorm" र धेरै अरु जस्तै लागूपदार्थ छन्। जबकि मूल तयारी स्विस दबाइ उत्पादित छ ती सबै, रूस मा उत्पादित गर्दै छन्।
यो दबाइ "Gynoflor ई" कार्य को microflora मात्र दुरुस्त छ कि ज्ञात छ। उहाँले पनि एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने छ। यस सन्दर्भमा, दबाइ को अप्रत्यक्ष analogues मोमबत्ती समावेश "Hexicon", "Genferon", "Kipferon" र यति मा। थप विवरण मुख्य विकल्प (analogues) मा विचार गर्नुहोस्। "Gynoflor ई" तिनीहरूलाई धेरै छ।
"Bifidumbacterin" - एक सस्ती विकल्प
"Gynoflor ई" समकक्षों दबाइ सस्ता छन्। उदाहरणका लागि, "Bifidumbacterin"। यो 10 suppositories बारे 90 rubles को लागि खरीद गर्न सक्छ। यो 10 पटक मूल दबाइ को लागत भन्दा कम छ। योनी suppositories उपलब्ध "Bifidumbacterin" रूसी कम्पनी "Vitafarma"। तयारीको bifidum जीवाणुहरु समावेश छ। यो उपकरण को एक विशिष्ट सुविधा यसलाई vaginally छैन मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो। मोमबत्ती आंतों microflora पुनर्स्थापना rectally प्रबन्ध छन्। महिला पनि मोटोपना (हर्मोन प्रकृति सहित), जीवाणु vaginosis, रूपमा एक दबाइ सल्लाह दिन्छन् dysbiosis योनी। दबाइ को microflora पत्र गर्न भनेर expectant आमा सिफारिस गरिएको छ वितरण अघि।
यो उपकरण बारेमा समीक्षा मुख्य रूप राम्रो छ। महिला दबाइ दुई पटक एक दिन 5-10 दिनको लागि प्रयोग गरिएको छ भन्छन्। प्रति उपचार को पाठ्यक्रम 1-2 प्याकेजिङ्ग औषधि आवश्यक छ। किनभने खरीद यसको सस्तो लागत मुद्दाहरूको सामान्यतया उत्पन्न गर्दैन। यो दबाइ (आफ्नो पूर्ववर्ती गर्न विपरीत, प्रिय) कुनै Contra-सङ्केत गर्छ छ (अतिसंवेदनशीलता बाहेक) महत्त्वपूर्ण छ।
मोमबत्ती को निम्न एनालग "Gynoflor ई" - दबाइ "atsilakt"। अनुसार समीक्षा उपभोक्ता यो अक्सर हालतमा "Bifidumbacterin" मिलेर निर्धारित छ। औषधि एक रूसी ( "Vitafarma") द्वारा निर्मित छन् दिइएको, यो एकदम जायज छ। Medicaments पूरक। तपाईंले पहिले नै "Bifidumbacterin" bifidobacteria समावेश थाहा छ। "Atsilakt" lactobacillus Acidophilus वर्तमान को मैनबत्ती, "Gynoflor ई" मूल स्विस चिकित्सा रूपमा भाग रूपमा। क्रममा Prescribers को योनी microflora र प्रतिरक्षा महिला मर्मतका पुनर्स्थापना। 1 suppository 5-10 दिनको लागि एक दिन दुई पटक लागू गरियो।
सकारात्मक दबाइ को समीक्षा। लागत द्वारा प्ले यो महत्त्वपूर्ण भूमिका: 10 suppositories खरिद 150 rubles को लागि हुन सक्छ। महिला दबाइ प्रयोग पछि तिनीहरूले बेपत्ता र सूक्खापना एक भावना खुजली, सामान्यीकृत छुट्टी थिए भन्छन्। को दाना 'Bifidumbacterin "दबाइ संयोजनमा थप प्रभावकारी।
"Laktonorm" - एक लोकप्रिय विकल्प
दबाइ "Gynoflor ई" analogs कम खर्चिलो, तर सस्तो छैन। यी एक चिकित्सा "Laktonorm" समावेश गर्नुहोस्। Suppositories प्याक प्रति 14 टुक्रा उत्पादन। निर्माता कम्पनी "लेक्को" (रूस) छ। किन्न योनी ट्याब्लेटको एक प्याक वरिपरि 500 rubles मा मूल्य हुन सक्छ। दवादारू "Gynoflor ई" मा जस्तै Lactobacillus Acidophilus बनेको। रूसी एनालग estriol को अभाव distinguishes।
चिकित्सा प्रकारका नै बरु विरोधाभासी राय। धेरै उपभोक्ताहरु किनभने उच्च लागत को दबाइ किन्न छैन। महिला सस्ता समकक्षों रुचाउँछु। दवादारू "Laktonorm" (रजोनिवृत्ति समयमा सहित) विभिन्न प्रकृतिका उपचार र vaginosis को रोकथाम र vaginitis लागि प्रयोग गरिन्छ। डाक्टर यसलाई मा हालतमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ भनेर भन्न योनी candidiasis। यस मामला मा दबाइ मात्र रोगी को स्थिति worsen हुनेछ। महिला को उपचार पर्याप्त दबाइ को बस एक प्याक किन्न। दानाको एक दिन, दुई पटक एक हप्ताको लागि योनी मा सम्मिलित गरियो। सुविधाजनक, को applicator प्याकेज संलग्न छ। यसको प्रयोगले हात मा उपस्थित छन् कि pathogenic सूक्ष्मजीवहरु को प्रवेश देखि रक्षा।
"Livarol" - को मोमबत्ती को "Gynoflor ई" रूसी बराबर
यो उत्पादन रूसी औषधि कम्पनी "Nizhpharm" मा निर्मित छ। suppositories5र 10 एक प्याकमा लागि उत्पादन दवादारू। दबाइ हुन सक्छ, 600 र 800 rubles किन्न क्रमशः। को संरचना ketoconazole समावेश गर्दछ। यो पदार्थ antifungal गतिविधि छ। दबाइ निर्देशन "Gynoflor ई" अनुसार रोगाणुरोधी antiseptics बुझाउँछ। तसर्थ, दबाइ "Livarol" केही तरिका यसको समकक्ष छ।
महिला यस दबाइ अनियतकाल प्रकृति को योनी तरल पदार्थ को उपचार प्रभावकारी हुन्छ भनेर भन्न, यो पूर्ण खमीर हटाउँदछ। तपाईं सारांश पढ्न भने, तपाईं "Livarol" एंटीबायोटिक उपचार पछि योनी वनस्पतिहरूको पुनर्स्थापना गर्न प्रयोग गरिन्छ भनेर हेर्न सक्छन्। ठूलो हेरविचार चिकित्सा गर्भधारण र lactation समयमा प्रयोग गरिएको छ। सुविधाजनक, को suppositories मात्र एक दिन एक पटक प्रबन्ध छन्। उपचार एक चिकित्सक द्वारा310 दिन देखि रहन्छ।
"Kipferon" - antiviral immunomodulator
अर्को मोमबत्ती "Gynoflor ई" विकल्प - दबाइ "Kipferon"। यो कुनै Acidophilus सूक्ष्मजीवहरु हो कि चिकित्सा distinguishes। तर यो बाबजुद suppositories प्रतिरक्षा प्रणाली समर्थन र योनी को प्राकृतिक microflora पुनर्स्थापना गर्न प्रयोग गरिन्छ। सङ्केत गर्छ vaginitis, candidiasis, chlamydia, dysbiosis, योनी को संक्रामक भडकाऊ रोगहरु छन्। तपाईं गर्भावस्था को समयमा साथै, उच्च संवेदनशीलता संग दबाइ "Kipferon" प्रयोग गर्न सक्छ। एक निर्धारण बिना कुनै पनि फार्मेसी तपाईं 800 rubles को लागि मतलब किन्न।
अक्सर, उपभोक्ताहरु हेर्नुहोस् मूल्य इन्कार गर्न "Gynoflor ई" दबाइ को। महिला Analogues सस्ता खोजिरहेका छन्। साँच्चै, यो उपकरण संग उपचार महंगा छ। दबाइ प्रति दिन2suppositories गर्न 12 दिनको लागि नियुक्त गरिएको छ भने, त्यसपछि तपाईं 24 योनी ट्याब्लेटको खरिद गर्न हुनेछ। यी 1600 rubles को दुई ठूलो पैक छन्। सहमत छैन हरेक महिला यो किन्न सक्छन्।
रूसी विकल्प मोमबत्ती "Gynoflor ई" (analogues) एक अधिक किफायती मूल्य हो। उही "Laktonorm" 500 rubles को लागि खरिद गर्न सकिन्छ, तर यो महंगा मानिन्छ। तपाईं एक किफायती मूल्य मा acidophilic lactobacilli संग दबाइ खोजिरहेको भने, रोगी "atsilakt" चयन सिफारिस अनुभव। दबाइ सस्ती र प्रभावकारी हुन्छ। यस्तो राय उपभोक्ताहरूको यसको बारेमा गठन गरिएको छ।
हामी खातामा सबै विकल्प औषधीको "Gynoflor ई" ले भने, हामी तिनीहरू सुरक्षित र प्रभावकारी छन् भनेर भन्न सकिन्छ। महिला लागूपदार्थ इच्छित प्रभाव प्रयोग प्राप्त। धेरै लागूपदार्थ गर्भावस्था को समयमा प्रयोग गर्न स्वीकार्य छन्। expectant आमा सामान्य योनी microflora कायम गर्न विशेष महत्त्वपूर्ण छ रूपमा यो, एक प्लस छ।
तपाईंले केही कारण लागि दबाइ "Gynoflor ई", तर तपाईं निर्धारित छ भने यो किन्न सक्दैन, त्यसपछि तपाईं analogues चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गर्न, यो एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ परामर्श र यो तपाईं स्वीकार गर्नेछ अर्थ के थाहा लायक छ। छैन आत्म-medicate, यो अप्रिय परिणाम निम्त्याउन सक्छ गर्छन्। एक राम्रो दिन छ, बिरामी छैन!
दबाइ "lincomycin"। सङ्केत गर्छ। अमूर्त
'Vikalin' हो। प्रयोगको लागि निर्देशन
एक inflamed लसीका नोड कसरी निको पार्न गर्न?
कति क्यालोरी को "Olivier" छन्? तापवर्धक मूल्य को संकल्प
विन्डोज 10 कन्फिगर अधिकतम प्रदर्शन को लागि: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
रेकर्डो Lopez सानो बक्सिङ विशाल